गुल्मी जिल्ला समाज यु.के.ले गुल्मीमा के के गर्‍यो? के के गर्दैछ ? (अडियो कुराकानी) – Gulmiews
गुल्मी जिल्ला समाज यु.के.ले गुल्मीमा के के गर्‍यो? के के गर्दैछ ? (अडियो कुराकानी)
२२ श्रावण २०७२, शुक्रबार १७:३६ Sanju Kauchha
No comments	समाजले हालसम्म डेढ करोड रुपैँया भन्दा बढीको सहयोग जिल्ला भित्र्यायो
गुल्मी, साउन २२ । जिल्ला यु.के .समाजले आज जिल्लाको पिपलधारा गाविसलाई एम्वुलेन्स सेवा सञ्चालनका लागि एक लाख रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ । वेलायतबाट आएका समाजका उपाध्यक्ष केशव भण्डारी र कानुनी सल्लाहकार चेतनाथ खनालले आज तम्घासमा एक समारोहका विच पिपलधारा चौतरी सम्पर्क समिति विश्व सञ्जाललाई हस्तान्तरण गरेका हन् ।
समाजले हाल सम्म जिल्लामा डेढ करोड भन्दा बढि सहयोग गरेको छ । जिल्लावासी भुकम्प पिडितहरुलाई ५ लाख र देशभरका भुकम्प पिडितहरुलाई प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ लाख सहयोग गरेका छ । यसअघी जिल्लाका बिभिन्न स्थानमा ४ वटा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिसकेको समाजले अपाङ्गहरुको पुनर्स्थापना र शसक्तिकरणको लागि आशा अपाङ्ग केन्द्र मार्फत सहयोग गर्दै आएको छ । यसैगरी जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले बिभिन्न शैक्षिक सँस्थाहरुमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै घरबार बिहिन अवस्थामा बिचल्ली परेको परिवारको लागि आवासको ब्यवस्था पनि गरिदिएको छ । यसका अलावा ठुलो खर्चलाग्ने रोगहरुबाट पीडित गरीब परिवारका बिरामीहरुको उपक्षरार्थ सहयोग पनि गर्दै आएको छ । सुनौँ गुल्मी जिल्ला समाज युकेका उपाध्यक्ष केशब भण्डारीसँग गुल्मीन्युज सहकर्मी प्रेम सुनारले गर्नुभएको बिशेष कुराकानी: